WhatsApp for iOS dia havaozina indray androany | Vaovao momba ny gadget
WhatsApp for iOS dia havaozina indray androany
Ny fanavaozana ny WhatsApp dia nitohy nandritra ny fotoana fohy ary na dia marina aza fa tsy ireo fanavaozana rehetra ireo dia mitondra fanatsarana lehibe ho an'ny fampiharana mailaka faran'izay tsara, dia mbola fanavaozam-baovao izay azo antoka fa ilaina amin'ny fampandehanana tsara ny fampiharana. Amin'ity tranga ity dia kely na tsy misy inona ity fanavaozana ity ho an'ny mpampiasa iOS raha jerena ilay faritra asehon'izy ireo amintsika ny antsipirian'ny fanavaozana, ary izany dia tsy misy fiovana hita raha oharina amin'ny kinova taloha, farafaharatsiny ao amin'ny lahatsoratra.
Ity no nohazavain'izy ireo taminay tao amin'ny tsikera fampiharana kinova 2.16.18 izay ny farany:
Mampahafantatra antso an-tsary WhatsApp izahay. Amin'ny alàlan'ny antso an-tsary maimaimpoana dia afaka miresaka mivantana amin'ny namanao sy ny fianakavianao manerantany ianao izao. Mety misy fiampangana amin'ny fampiasana ny serivisy data. (Mila iOS 8 na taty aoriana)
Mikaroha GIF tonga lafatra, avy amin'ny WhatsApp. Tsindrio (+) ary fidio Reel. Ny safidy hikarohana GIF dia eo amin'ny ankavia ambany.
Tena tsy misy fiovana eo amin'ny lahatsoratra momba ilay kinova taloha, izay 2.16.17, noho izany dia heverinay fa ny fanovana nampiana dia vitsy na tsy misy raha ny momba ny fiasan'ny fampiharana. Raha tsy misy an'io ny zava-misy, ireo fanavaozana ireo dia zavatra izay mazàna ataon'ireo mpandrindra fampiharana lehibe. manadio ny tsikera fampiharana ao amin'ny magazay an-tserasera indraindray, saingy tsy mino izahay fa izany no izy. Na izany na tsy izany dia havaozina ny fampiharana anio ary raha misy fiovana lehibe na miavaka hita ao dia hizara azy rehetra aminareo izahay ato amin'ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » WhatsApp for iOS dia havaozina indray androany
Ireo Mac izay hanampy amin'ny lisitry ny lany andro ho an'ny Apple amin'ny volana desambra dia ...
Tsaho maro hafa momba ny Huawei P10. Kitapo miolakolaka tsy misy bokotra